कामनपा वडा ५ अध्यक्षका उम्मेदवार रमेश डंगोलको जित निश्चिति ! - Janata Ko Aawaj
कामनपा वडा ५ अध्यक्षका उम्मेदवार रमेश डंगोलको जित निश्चिति !
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २१, २०७९ समय: १५:०७:३१
काठमाडौं महानगरपालिका वडा ५ को अध्यक्षका लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट पुनः उम्मेदवारी दिएका छ्न रमेश डंगोलले ।
देशको राजधानी काठमाडौ सहर रहेको एतिहासिक सहर हाडीगाउँ केन्द्र बिन्दु रहेको र मालीगाउँ भत्केकोपुल लगायत एरिया यो पाँच नम्बर वडामा पर्छ।
अध्यक्षका उमेदवार रमेश डंगोल जिल्लाकै लोकप्रिय नेतामा हुनुहुन्छ ।
नेपालको ईतिहासमस नेपाली काग्रेश पार्टीको लागि उहाँको ठुलो योगदान छ।
उहाँ असल र गुनि नेताको रूपमा चिनिनु हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा रमेश डंगोल जनता लोकप्रिय कर्णप्रीय हुनुहुन्छ ।
२०७४ स्थानीय निवाचनमा वडा अध्यक्ष रहि राज्य संचालनको अनुभव लिनु भएको रमेश उर्जावान हुनुपर्छ ।
उहाँको योगदान ठूलो रहे पनि उहाँ अहिले सम्म पनि पार्टीको तर्फबाट कुनै लाभको पदमा रहि कुनै कमाउने कुरामा उहाँको मन गएन। उहाँले जनताको सेवाको लागि राजनीति गर्नु भएको हो। । नेपाली काङ्ग्रेसमा उहाँ अनुभवी युवा नेताको छवि बनाउनु भएको रमेशलाई महानगरको पाँच नम्बरलाई बिकास कसरी गर्ने र जनतालाई कस्तो सेवा सुबिधा दिने भन्ने कुरामा उहाँको बिलकुल नयाँ भिजन रहेको छ।
ब्यतिगत स्वार्थ भन्दा गाउँको आम जनताको हितमा काम गर्ने र जनतालाई सेवा सुबिधा कसरी दिने चिन्तित हुनुहुन्छ । ईतिहास बोकेको पौराणिक हाडीगाउँलाई कसरि जिवन्त राख्ने, मन्दिरको सहरलाई अझ बिश्वमा कसरी चिनाउने भन्न्ने कुरामा चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँको योगदान समाज र रास्ट्रको लागि ठूलो छ। नेतामा हुनुपर्ने सबै गुण उहाँमा छ।
जनताको माग पनि रमेश यो वडामा अध्यक्ष हुनुपर्ने रहेकोे छ। उहाँको योगदान यो ठाउँका जनताले बुझेका छ्न।
चुनाव मात्र होईन उहाँले जनता मन जित्नु भएको छ।
नेपालमा हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच नम्बर वडा प्रमुख अध्यक्ष को लागि उहाँलाई नै ल्याउनु पर्ने स्थानीय बताउछ्न।
रमेशले जनताको बिस्वास जितेकोले जित निश्चित भएको कुरा स्थानीयले बताए ।
स्थानीय जनताले पनि उहाँलाई खोजी गरिरहेका छ्न। शुसासनको पक्षमा लडिरहने रमेश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन समेत अग्रपंक्तिमा लडनु भएको छ। जेल नेल भोगेको उनले अनुभव छ ।
उहाँ करिव साढ़े चार दशक देखि अविचलित रही राजनीति निरन्तरता कायम हुनुहुन्छ । यही जप, उपमाको अग्निपरीक्षाका रुपमा वडा प्रमुख उम्मेदवारी दिनु भएको उहाँलाई जनताले जिताउने निश्चित छ।
समर्पणको कदर गरि उहाँलाई उम्मेदवार बनायकाले जित निश्चित भएको समाजसेवी स्याम श्रेष्ठ बताउछ्न।
उहाँलाई पाँचौ नम्बर वडाका जनताले मात्र होईन काठमाडौ जिल्ला भरीका देशबक्त बुद्धिजिबिको पनि पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने गरेको छ्न।
नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त उहाँले मन पराएर राजनीतिमा होमिएको स्थानीय बताउछन। त्यसपछि हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अक्षुण रूपमा अहिले सम्म लागिरहनु भएको छ । नेपाल काङ्ग्रेस नेता गणेशमान शिङ् जस्तो भाँचिने तर कहिले नदबिन नेताहरुको प्रेरणा र आशिर्वादले सतिसाल जस्तै राजनीतिक यात्रामा हुनुहुन्छ ।
२०४२ सालको सत्यग्रहदेखि २०४६ सालको आन्दोलन या २०६२/२०६३को आन्दोलनमा पनि उहाँ निर्न्तररूपमा अग्रमोर्चा लडनु भएको थियो ।
नेपालका हरेक प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा राजनीतिक क्रान्तिका उभार बोकेका गतिविधिमा लाग्नु भएको कर्तव्य निर्वाह गरेको स्थानीय बुद्धिजिबिले बताए ।
उहाँका तेति खेरका साथीहरु मन्त्री भैइसकेका छ्न पटक पटक ! गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि भएको दोस्रो जनआन्दोलन पनि रमेशको अहम भूमिकामा रहयो। जेल नेल अनुभवले तिखार्यो । पदीय दायित्वको निर्वाह गर्ने क्रममा पार्टी सदारण सदस्य हुदै पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन क्षेत्र ५ उपसभापति एव प्रदेश ५ (क) को शभापती हुनुहुछ । ।
विभिन्न संघ संस्थाको जिम्मेवार पदमा रहि काम गरेको अनुभव छ । पार्टी र जनताको सेवामा समर्पित हुदै आउनु भएको छ। उहाँले कहिले पनि राजनीतिलाई कुनै आर्थिक आम्दानीको स्रोतका रूपमा जिवनमा हेर्नु भएन।
यो कर्म उहाँको लागि देश र जनता प्रति विशुद्ध सेवा हो । भिम विभिन्न सामाजिक सेवामा निरन्तर समर्पित हुनुहुन्छ । जनतामा समर्पित रहेको सर्वविधित नै छ।
अनुशासित जीवन बाकी पृष्ठभूमि छ । जसले भट्टराईलाई निस्कलन्क देखाउने गरेको छ। समय सहकार्य र अनुशासन पालना गर्न सधै प्रेरित ब्यक्ति ,स्वस्थ जीवनविना स्वच्छ समाज कसरी सम्भव छ, जीवनका विभिन्न आयाममा आफूलाई परीक्षण गर्ने काम सम्पन्न गर्नु भएको छ
विभिन्न देशको भ्रमणले देश प्रति र माटो र मुटु बन सहयोग गरेको छ । विकासक रेखा कोर्न यी सबै अनुभव उत्प्रेरक हुने छ । यसपटक रुख चिन्हको छापमा रमेशलाई बिजय गराउन समयको माग छ।
ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सात पाँच वडा भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको जिउँदो ईतिहास हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको केन्द्र बिन्दु हो।
यहाँको माटोले रमेशको छाया मागेको छ। यहाँको माटोमा प्रतिविम्वित हुने भएकोले सबैको साझाको रुपमा यो नगरिलाई व्यवस्थित र समय अनुकूल कला, संस्कृति, सम्पदा र प्रकृति मैत्रि विकास गर्ने केरुङको दृढता र संकल्प रहेको छ ।
उहाँको उपस्थितिलाई सगुनको धड़ा मानेर विजयमाला पहिराईदिने बाचा सबै वडावासिले गरेका छ्न।
बौद्धिकताले प्रखर युवा नेता रमेशलाई काठमाडौ को भबिस्य उज्जवल बनाउने कुरामा बिस्वस्त छ्न।
आगामी निर्बाचनमा भारी मात्रा मत पाएर बिजय गराउन अपिल गरेका छ्न।
न्युज रिपोर्टर : किसोर ढुंगेल
यो दुनियाँ बडो अचम्मको छ सब कुरा पाएरपनी हास्नका लागि समय छैन दिन रात भागेको यो दुनियाँको लागि तर आफ्नो जिन्दगीको लागि स...
कविता : उस्तै आकाश लेखक शान्तिदिप रेग्मी
एउटै आकाशमुनि जन्मियो हो। यो पृथ्वीको माटोले बनेको हो जन्मदेखि नै ढालिएको जीवन र परिस्थिति एक मूर्तिकार हो हामी यसको काम...